Wacdinta, Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo ayaa igu dhex nool, in Soomaali, Ilaah Deus, Elohim, Jeová waa kugula jiraa, Ciise Masiix Jesus Cristo yahay Rabbiga, Ilaah Deus, Elohim, Jeová wuxuu leeyahay shuqul weyn ee nolosha
por Lucas2017 em Qua Dez 28, 2016 7:12 am
Oo kolkii maalintii Bentekoste la gaadhay, meel bay kulligood wada joogeen. Oo waxaa filanla'aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo aad u dhacaysa, oo waxay buuxisay gurigii ay fadhiyeen oo dhan. Markaasaa carrabbo u kala qaybsamaya sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta. Kolkaasaa waxaa kulligood ka wada buuxsamay Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo, oo waxay bilaabeen inay afaf kale ku hadlaan sidii Ruuxu iyaga u siiyey hadalka.
5Markaas waxaa Yeruusaalem joogay Yuhuud oo ahaayeen niman cibaado leh oo ka yimid quruun kasta oo samada hoosteeda joogta.
FALIMAHA RASUULLADAA 2, 1 ao 5
Isagu markuu yimaado wuxuu dunida ku caddayn doonaa xagga dembiga iyo xaqa iyo xukunka;
YOOXANAA 16, 8
Ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha Ruuxa Espírito Ilaah Deus, Elohim, Jeová, waayo, nacasnimo bay u yihiin, mana garan karo, maxaa yeelay, ruuxa Espírito Santo ayaa lagu imtixaamaa.
KORINTOS I, 2,14
Ama miyaanaydin ogayn jidhkiinnu inuu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo ee idinku jira ee aad Ilaah Deus, Elohim, Jeová ka hesheen? Oo idinku isma lihidin,
KORINTOS I, 6, 19
Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska Espírito Santo ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog.
FALIMAHA RASUULLADA 1, 8
Ruuxa Espírito qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta Ilaah Deus, Elohim, Jeová.
ROOMA 8, 26
Laakiin midhaha Ruuxu Espírito waa jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo,
Ruuxii Espírito Rabbiga ayaa i dul jooga,
Waayo, wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo,
Wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ogeysiiyo
Iyo kuwa indhaha la' soo celinta araggooda
Iyo inaan kuwa nabaraysan soo furfuro,
LUUKOS 4, 18
Aniguna Aabbahaan baryi doonaa, isna wuxuu idin siin doonaa Gargaare kale inuu idinla jiro weligiin, waxaa weeye, Ruuxa Espírito runta ah oo aanay dunidu qaadan karin, waayo, ma aragto, garanna mayso, idinkuse waad garanaysaan, waayo, wuu idinla jiraa, wuuna idinku jiri doonaa. Idiinkama tegi doono agoonnimo, ee waan idiin imanayaa. In yar dabadeed dunidu i arki mayso mar dambe, idinkuse waad i arkaysaan. Waan noolahay, taas aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan. Maalintaas waxaad garan doontaan inaan Aabbahay ku jiro, idinna aad igu jirtaan, anna aan idinku jiro. Kii qaynuunnadayda haysta oo xajiya, waa kaas kan i jecel, kan i jecelna Aabbahay waa jeclaan doonaa, anna waan jeclaan doonaa, waana isu muujin doonaa isaga. Yuudas (Yuudas Iskariyod ma aha) ayaa ku yidhi isaga, Sayidow, maxaa dhacay oo annaga aad isugu kaaya muujin doontaa, dunidana aadan isugu muujin doonin? Ciise Jesus ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Haddii nin i jecel yahay, ereygayguu xajin doonaa, Aabbahayna waa jeclaan doonaa, oo waannu u iman doonnaa, waanna la joogi doonnaa. Kii aan i jeclayn, ereygayga ma xajiyo: ereygaad maqlaysaanna kayga ma aha, laakiin waxaa leh Aabbaha i soo diray.
Waxyaalahaas ayaan idinkula hadlay intaan idinla joogay, laakiin Gargaaraha Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo oo Aabbuhu ku soo diri doono magacayga, wax kasta ayuu idin bari doonaa, wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku idhi.
YOOXANAA 14, 16 ao 26
Ruuxa Quduuska Espírito Santo IN ore Me, iftiinka Ilaah Deus, Elohim, Jeová, u All Si aan u baahan tahay, Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo isticmaalaan erayo caynkaas ah, oo aan u baahan tahay si ay u isticmaalaan, laakiin ma sheegi karo, waxaan NAS AjUDE liito My, Ma Garanayo Sidee baan WEYDII, Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo YIMID Shafeeceene, ii, dhammaan waxaasna wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ay aad u jecel, Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo IMAN ducee ME
Ruuxa Espírito, Ruuxa Espírito sidii dab oo kale soo degaya, yimaado sida Bentakostiga oo mar kale ila buuxiyo
Markaasaa Ciise Jesus wuxuu ku yidhi, Ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan, waayo, kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada. Gacmihiisa ayuu saaray iyaga, markaasuu meeshaas ka tegey.
MATAYOS 19, 14 ao 15
Ruuxa Quduuska Espírito Santo sameeyey Miracle Great Hum in My Life, Laakiin EU inaan u imid inaan ku dhinto, mas Wuxuu iga samatabbixiyey dhimasho ka, cadaabta, oo samayn COL dhacay DHEERAAD ugu yaraan saddex sano ka hor, markii aan ahaa mid aad u buka, waxay ahayd seed qalal xummad, ka dibna waxaan kor iyo boqolkiiba toosay aadan lahayn movies caloosha anigaa aad u xoog badan oo aan daawado, ka dib markii uu xanuun in jidhkayga dhintay si buuxda, ka dibna si lama filaan ah ayaan sariirtayda ka soo baxay oo la Body iyo dhulka ku dhacay, ka dibna jidhkayga waxaan arkay goleyaasha, ruuxayga ahayd ka mid ah jidhkayga, EU iyada oo aan garka iyo dhinaca sanka iga galay, ka dibna waxaan si lama filaan ah cents COL, Yaa adkaaday in Magaca Ciise Masiix Jesus Cristo, i jiidaya cadaabta, maxaa yeelay, ma waxaan lahaa Ciise, laakiin waxaan si lama filaan ah waxaan maqlay cod ah Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo ayaa ii sheegaya Love, waxaan jeclaada, wixii uu Layover wakhtigaas ahaa que waan jeclaan jiray, ka dibna waxaan cents FITAMIIN Agtiisa waa maxay waxa ugu fiican Taasi waa, ka dibna Wuxuu iga samatabbixiyey ka Jahannamo, ka dhimashada iyo COL, MARKAA in ka dib, oo aabbahay iyo Hum aan wiil gaaray badbaadinta Baaragaraafka oo iga soo kaxeeyey dhulka ku, iyo Tan EU jidhkayga goleyaasha marayo, MARKAA u dhaxaysay mid ka mid ah si gaar ah uu yimid on dhulka iyo, Ruuxa Quduuska ah Espírito Santo ayaa ii leeyahay of Back to nolosha, EU dib Oohinta in Sidaas xoog leh FITAMIIN agtiisa ah, aad u qayliyey EU ahaa Wonderful, iyo noloshayda soo jeestay, ka dib markii si aanan u ahaa qof kale, Aad u Fiican waayo, Qoyska, waxaan noqday in waalidka lahayn My Person oo addeecda AOS, oo addeecay inuu Ilaah, iyo waxaan aqbalay Ciise Masiix Jesus Cristo sida keliya oo ku filan badbaaiyahaaga gaarka ah, My ahaa Life bedelay, gabi ahaanba beddelay, waxay ahayd Wonderful, waxa ugu fiican ee aan ku dhacay, maanta waan faraxsanahay, Graças Esse Miracle a Glorias Ilaah, wuxuuna NOS ama badan, ee Magaca Ciise Masiix Jesus Cristo, Aamiin
Ilaah Deus, Elohim, Jeová baa kula jira